क्रान्तिकारी देशभक्ति को पदक पाईन्छ भने म पनि के कम - Supadeuralionline::सुपादेउराली अनलाइन
क्रान्तिकारी देशभक्ति को पदक पाईन्छ भने म पनि के कम
हामी यहा कोरोना फैलिसकेको डरले साबुनपानीले हात धोएको धोऐ गरेकाछौ,तिनीहरूले नेपाली जमिनमा 80 किलोमिटर बाटो खनेर ऊदघाटन समेत गरिसकेछन,दोपहरको भोजन गरेर म त आराम गरिसकेको थिए।मोबाइलको बेट्री सकिएर स्वीचआफ भैसकेको थियो। मोबाइल चार्जरमा हालेर फेरी साबुनपानीले हात धुन गए, मरिन्छ कि भन्ने डरले होला बीस सेकेन्ड भनेको ता बिस मिटन जति हात रगडिएछ,मोबाइलको चार्जिंग पनि 63% भैसकेको रहेछ। सिधै डाटा खोलेर ह्वात्तै फेशबुकमा घुसे, बाफ रे बाप के हेर्नामान छ र? फेशबुके देशभक्ति रातै रातै रातै….
मलाई पनि झनक्कै रिस ऊठ्यो, एऊटा विज्ञप्ति, एऊटा वालपोस्ट, एऊटा कार्टुन, एऊटा व्यंग्य, एऊटा गजल, एऊटा गित भिडियो फिल्म बनाएर क्रान्तिकारी देशभक्ति को पदक पाईन्छ भने म पनि के कम! माणिखोलाको पानी खाको प्यूठानी हुनाले अलि अलि बाठो म पनि छु।मैले पनि जिन्दाबाद र मुर्दावाद लेखेर जिम्मेवारी निभाऊने ठाने।हत्तपत्त एऊटा गतिलो कालो पोष्ट डामिदिए। कति लाईक कमेन्ट आऊछ हेर्नथाले।म ढुक्क भए, लाईक कमेन्ट को बर्षात हुनथाल्यो म गमक्क परे। तर एऊटा तिखो रातो कमेन्टले मेरो मुटुमा चुसुक्क घोच्यो मानौ म जिवित रहुन्जेल दुखिरहनेछ। तपाईको कोठाभित्र बसेर लेखेको विज्ञप्ति जिन्दाबाद मुर्दावाद कमेन्ट पोस्टले लाईक कमेन्ट ता पायो, नेता ज्यू तपाईको छाक पनि टर्यो तर मिचिएको सिमा फिर्ता भएन। के तपाईको राजनिती फेशबुकमा, विज्ञप्तिमा, कोठामा मात्रै हो त? थोरै शब्दमा धेरै प्रश्न ओईरियो। क्रान्तिकारी संगठन व्यक्ति यसरि निदाऊनु देश र जनताको लागि अभिशाप हो। म क्रान्तिकारी को नाममा कलंक हो, म बाट गल्ती हुदैछ….#आत्मगलानी।
-विन बहादुर रेग्मी, सुरतबाट।